Imagazini yoyilo
Umboniso Womboniso Le yiprojekthi yokuyila umboniso wefashoni yendlela yomashonisa eChina. Umxholo wale bhodi yendlela ubalaselisa ukubanakho kolutsha lokuzicwangcisa umfanekiso wabo, kwaye lubonisa nengxolo yokuqhushumka kwale ndlela yenziwa esidlangalaleni. Ifom yeZigzag yayisetyenziswa njengeyona nto ibalulekileyo yokubonakalayo, kodwa ngolungelelwaniso olwahlukileyo xa lufakelwa kwizindlu kwiidolophu ezahlukeneyo. Ubume beendawo zokubonisa bonisa zonke “iikhithi-zeenxalenye” ezenziwe ngaphambili kumzi-mveliso kwaye zafakwa kwisiza. Amanye amalungu anokuphinda asetyenziswe okanye aqhelaniswe nokwenza i-design entsha ye-booth yesitrato esilandelayo sokuma kwendlela.
Ukuvela Kuyilo Loyilo Kuyilo
Ukuvela Kuyilo Loyilo Kuyilo Le ncwadi imalunga nokuyilwa komzobo; Inika ukucaciswa, ukujonga okuchaziweyo kuyilo loyilo njengenkqubo esetyenziselwa ukunxibelelana nabaphulaphuli ngeenkcubeko ezahlukeneyo ngokusebenzisa iindlela zoyilo kubandakanya intsingiselo yoyilo lwegraphic njengendima, iinkqubo zoyilo njengeendlela zokuyila, uyilo lokwenza uphawu njengemeko yentengiso, uyilo lokupakisha kunye Iitemplate ezilungisiweyo kwaye ziqulethe imisebenzi evela kwindalo yokucinga kakhulu, esetyenziselwa ukubonisa imigaqo yoyilo.
Iofisi Yokuthengisa "Intaba" ngumxholo ophambili wale ofisi yokuthengisa, ekhuthazwayo yimvelaphi yeChongqing. Iphethini yeemabula ezingwevu ezantsi zenza imilo engxantathu; kwaye kukho i-engile engaqhelekanga kunye neekona ezibukhali kwiikona zodonga kunye nezinto zokugcina ezingamiselwanga zokwenza umboniso, ukubonisa umxholo "wentaba". Ukongeza, izitebhisi ezidibanisa imigangatho yenzelwe ukuba ibe yindawo edlula emqolombeni. Ngeli xesha, izibane ze-LED zixhonywe kwisilingi, zixelisa imeko yemvula entlanjeni kwaye zibonisa imvakalelo yendalo, ukuthambisa yonke imbonakalo.
Imizobo Yendlu Yeholide
Imizobo Yendlu Yeholide Isitudiyo i-PRIM PRIM senzile isazisi esibonakalayo sendlu yeendwendwe i-SAKÀ kubandakanya: igama kunye nomzobo welogo, imizobo kwigumbi ngalinye (uyilo lweesimboli, iipateni zedonga, uyilo lwemifanekiso yodonga, izixhobo zomqamelo njl.njl.) Uyilo lwewebhusayithi, iiposikhadi, iibheji, amakhadi amagama kunye izimemo. Igumbi ngalinye lendlu yeendwendwe iSAKÀ ihambisa ibali le-Duskininkai (idolophu ekuchithelwa kuyo iiholide eLithuania indlu imi kuyo) kunye nemeko engqongileyo. Ligumbi ngalinye linophawu lwalo njengegama eliphambili kule ntsomi. Ezi icon zibonakala kwimizobo engaphakathi kunye nezinye izinto ezenza ukubonakala kwayo.
Umbhoxo Iirubhi ziyiflethi ngokwemvelo, injongo yayikukucel 'umngeni kule nyaniso ilula. Ukukhohlisa kobubanzi bemilinganiselo emithathu kufezekiswa ngemibala emithathu kuphela. Iitoni ezahlukeneyo kunye nobunzulu bombombho buxhomekeke kububanzi kunye nobungqingqwa bemigca, endaweni yependi enkulu yemibala enokuthi ibambe ngesithuba esithile, oko kuvumela ukusetyenziswa okuguqukayo. Ukusuka ngentla okanye kude, umbhojana ufana nephepha elisiweyo. Nangona kunjalo, xa uhleli okanye ulele phezu kwayo, umbono ojikelezayo awunakubonakala. Oku kukhokelela ekusetyenzisweni kwemigca elula ephindaphindwayo enokuzonwabisa njengephethini elingaqondakaliyo kufutshane.
Isinxibo Xa ukukhanya kungena phakathi kweefestile ngenqanaba elifanelekileyo, kuya kuvelisa inqanaba lokukhanya kobuhle, ukhanyiso oluzisa abantu kwigumbi xa imfihlakalo kwaye uthulisa ingqondo, njengoNyx ngendlela engaqondakaliyo kunye ethe cwaka, ukusetyenziswa kweelaphu ezigqumileyo kunye ukujija ukujija olo ncumo lobuhle.
CATINO Ukuqokelelwa Kwigumbi Lokuhlambela Monday 23 May
Temple Ukuma Kwekhekhe Sunday 22 May
calendar 2013 “Module” Ikhalenda Saturday 21 May
Yila udliwanondlebe losuku Monday 23 May
Yila intsomi yosuku Sunday 22 May
Uyilo losuku Saturday 21 May
Umyili wosuku Friday 20 May
Iqela loyilo losuku Thursday 19 May
Umboniso Womboniso Ukuvela Kuyilo Loyilo Kuyilo Iofisi Yokuthengisa Imizobo Yendlu Yeholide Umbhoxo Isinxibo